Oishi Sweet Corn 8G 40 Pcs – SUNNY eSTORE
Oishi Sweet Corn 8G 40 Pcs
SUNNY Everyday StoreSKU: 4800194110204
Oishi Sweet Corn ဟာဆိုရင် ပြောင်းဖူး နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး ချိုဆိမ့်အရသာရှိတာ် ကြောင့် သင်ပျင်းရင်ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မုန့်စားခြင်ရင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် Oishi Sweet Corn သည် အဆင်ပြေပါသည်။ ပြောင်းဖူးကို ကျော်ထားတာမဟုတ်ဘဲ ဖုတ်ထားတာဖြစ်သောကြောင့် Trans fat လဲလုံးဝမပါဘာ။
Allergy သတိပေးချက် - Wheat Gluten ၊ မြေပဲ ၊ ပဲ ၊ နှမ်း ၊ ကြက်ဥ ၊ ပဲနို့ ပါသည်
ပါဝင်သောပစ္စည်းများ - ပြောင်းဂျုံ ၊ စားအုံးဆီ ၊ ဆန် ၊ သကြား ၊ ဆား ၊ အရသာမှုန့် ၊ Flavour Enhancer ၊ Colour ၊ Emulsifier ၊ Antioxidant.
Oishi Sweet Corn is made with corn and it has not very sweet flavor so this snack is suitable to eat for some chewy food when you are bored or craving forasnack. These corns are not being fried but being baked, so it has0trans fat as well! Allergy Information: Contains wheat gluten, peanuts, nuts, sesame, egg, and soybean. Key
Ingredients: Corn Flour (39%), Vegetable Oil (Palm Oil), Wheat Flour (Gluten) (20%), Rice, Sugar, Salt, Flavouring, Flavour Enhancer (E621), Colour (E170), Emulsifier (E471), Antioxidant (E319).
Includes - 40 pieces of Oishi Sweet Corn (8g)